सिंगापुर र 500 डलर को चाइंग गम पछि गोप्य - 1aviagem.com
सिंगापुर र 500 डलरको चाइङ गम पछि गोप्य
अघिल्लो पोस्ट: मलेशिया - पेट्रोनास टावर्स
अर्को पोस्ट: ग्रामाडो मा सल्लाह - ब्राजिल
पोष्ट गरिएको 13 डिसेम्बर 2018 द्वारा रोमोमो लुकाना
ठीक छ यदि तपाई यो ब्लग पछ्याउनुहुन्छ भने तपाईले पहिले नै थाहा पाउनु मरीना खाई रेन्ड कसरि जान्छ, पोस्ट गर्न को लागी यहाँ छ: https://1aviagem.com/singapura-sobre-exposicoes-e-o-marina-bay-sands/
तर निस्सन्देह अहिलेसम्म यस देशको बारेमा धेरै बाँकी छ।
त्यसोभए, यो पोष्ट अघिल्लो जिज्ञासाको लागि पूरै जिज्ञासा, सुझावहरू र स्थानहरू हेर्नको लागि पूरै हो।
पहिलो चीज तपाईंले गर्नु हुँदैन, न त तपाईं सिंगापुरमा गर्न सक्नुहुन्छ ... चाइङ्ग गम!
र यो टिप मैले मेट्रो भएँ, चिन्हहरू चेताउनी गर्छन कि तपाई गम चुम्बन गर्न सक्नुहुन्न। अनि मैले सोचे, तर किन यो? र मैले जवाफ पछि गए। मैले निम्न भेटें:
सरकार एक अध्ययन गरे र पानी आँधी sluice फाटक, सार्वजनिक सम्पत्ति, को मेट्रो ढोका, आदि को मर्मतका को लागत, धेरै उच्च किनभने तिनीहरूलाई फँस चुइगम को थियो फेला परेन।
त्यसोभए तिनीहरूले बस देशमा यसलाई रोक्न निर्णय गरे। ठीक छ SGD 500,00 (सिंगापुर डलर)।
त्यसकारण चिंग गम सिंगापुरमा प्रतिबन्धित गरिएको छ। तर त्यहाँ निकोटिन गम वा औषधीय उद्देश्यका लागि केहि अपवादहरू छन्। यो अनुमति छ।
के तपाइँ चीइङ गमको लागि 500,00 तिर्न कठिन छ?
त्यसैले भ्रष्टाचारको लागि मेरो चालकको जवाफ सुन्नुहोस्।
होने सिंगापुर को IPC अनुसार संसारमा 10 सबैभन्दा इमानदार देश बीच थियो पढ्न: डाटा भनेर यहाँ यस साइटमा छन् (यो सबैभन्दा इमानदार 6º हुनेछ): https://www.ipc.transparenciainternacional.org.br/
त्यसैले मैले ट्याक्सी चालकलाई सोधें कि उनको भ्रष्टाचारको भावना थियो।
उहाँले प्रश्नको साथ डरलाग्दो जवाफ दिनुभयो र यस्तो जवाफ दिनुभयो:
"भ्रष्टाचार? मेरो देशमा? होइन! यदि कसैले भ्रष्ट हो भने, त्यो मृत्युको सजाय हुनेछ! "
मलाई जवाफमा अचम्म लाग्यो। एउटै टोकनबाट, ब्राजील कुल 96 को 180 स्थिति मा छ। (2017 डाटा)।
जिज्ञासाहरूको बारेमा कुरा गर्दै, मलाई टोयोटा प्राइममा सवारी गर्न चाहियो। उहाँले ब्राजील मा केही हाइब्रिड कार को एक (छ। म किनभने यो पर्याप्त इन्धन बचत हुनेछ, एउटा छ चाहन्छ। पेट्रोल र बिजुली अर्थ उत्प्रेरित छ तर दुर्भाग्य यो एक ब्राजिलियन लागि धेरै महँगो छ लागि। सिंगापुर मा पहिले नै यो रूपमा सेवा गर्दैछन् टैक्सी, र लगभग एक लोकप्रिय कार हो।
कम्तिमा खर्च गर्नुहोस् मरीना बे रेands मा दुई रात - एमबीएस.
यदि तपाइँ मात्र एक मात्र पार गर्नुहुन्छ भने तपाइँ निश्चित रूपमा सबै चीज पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुन्न। त्यहाँ बस्ने कारणहरू:
1- प्लगको प्लग प्रकारको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् यसको चार्जर को, त्यहाँ गर्तिका प्लग को लागि सार्वभौम छ। यहाँ दुई USB बंदरगाहहरू स्याकेटहरूको नजिक छन्, के यो हरेक यात्रीको सपना होइन? (I.e.
2- नाश्तामा सुरक्षित गर्नुहोस्।
मलाई थाहा छ कि मरीना बे कर्मचारी द्वारा सूचित गरिएको पहिलो रेस्टुरेन्ट 57 तलमा सुन्दर छत रेस्टुरेन्ट हुनेछ। तर यदि तपाईं पैसा बचत गर्न चाहानुहुन्छ भने B2 फ्लोरमा जानुहोस् र तपाइँको नाश्ता त्यहाँ बनाउनुहोस्। एक खाना विंग राम्रो तरिकाले राम्रो मूल्य छ। 50,00 देखि (मा 57 गर्न 10 तल्ला रेस्टुरेन्ट, B00 तल्ला मा2डलर मूल्य दायरा। अनि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं पनि खाजा ल्याउन र त्यहाँ एक सुन्दर दृश्य आफ्नो घर मा लिन अनुरोध गर्न सक्छ। (कुन लगभग बराबर छ रेस्टुरेन्टमा एक)।
3 - संसारको सबैभन्दा ठूलो अनन्तता पूल।
यो एमबीएस को शीर्ष मा छ, अर्को तिर रेस्टुरेन्ट को विपरीत। यो हराइरहेको हुन सक्दैन, दृश्य र 200 मिटर भन्दा बढी भन्दा पानीमा रहेको महसुस गरेर। रिफ्रेसिंग को अतिरिक्त धेरै सुखद र सुंदर वातावरण छ। अतिरिक्त टिप, दिउँसो जानुहोस्, पानी अधिक गर्मी हुनेछ, तपाईं सूर्यसेट कि हेड्स देखि देखा परे सम्म रहन सक्छ धेरै आश्चर्यजनक हुन्छ। साथै सूर्य यति बलियो हुनेछैन र तपाईं अझै पनि पोखरा भित्र बस्न एक lounger मा रहन सक्नुहुन्छ। यो गरिरहेको धेरै आराम छ, र मनोरञ्जन ...
तर यो आश्चर्यको पहुँच गर्न तपाईँ होटलमा रहनु आवश्यक छ। तपाई केवल अतिथि कार्डको साथमा जानुहुन्छ।
भ्रमण गर्न स्थानहरू:
यदि तपाईं एमबीएसमा बस्न पनि सक्नुहुन्न भने म भ्रमण गर्न सिफारिस गर्दछु किनमेल केन्द्र जो होटल श्रृंखला को तहखाने मा स्थित छ।
कारण, सबैलाई प्रभाव पार्नको लागि बनाइन्छ, एक ठंडा प्रणाली छ जसले छतको भाग खोल्छ र पानी भित्रभित्रै seeps, जस्तै यो पनि बाढी थियो। यो धेरै पानी हो कि यस प्रक्रिया पछि एक नाव मल भित्र भित्र बाट छोड्छ र आफ्नो वरिपरि फर्किएको हुन्छ। तपाईं पनि यो सेवा भाडामा पार्न सक्नुहुन्छ।
अर्को भ्रमण गर्ने ठाउँ हुनेछ cassino (माईबीएस परिसरमा पनि)। मैले यो रोचक भेटें किनकि नजिकका तिनीहरूले वित्तीय शिक्षामा लगानी गरे, त्यसैले तपाईलाई के थाहा छ कि खतराहरू के हो, तर अझै पनि यो जोखिमको साहस छ।
होइन पार्किंग सवारीको लागि "supercar" भाडामा राख्न सम्भव छ। म्याकललेन, लेम्बोर्गिनि, फेरारी, पोर्श। तर यसले केवल 300,00 मिनेटको लागि SGD 15 खर्च गर्नेछ ...
अन्तमा, एमबीएस पर्यवेक्षक, स्यान्ड स्काई पार्क यो बिना होस्ट गरिएको भ्रमण गर्न पनि सम्भव छ, तर SGD 20,00 लाई भुक्तानी गरिन्छ। यदि तपाई एमबीएसमा बस्दै हुनुहुन्छ भने, प्रवेश नि: शुल्क छ।
यो 165 मिटर उच्च संग विश्वमा दोस्रो दोस्रो फेरिस पहिया हो। प्रवेश द्वार एसजीडी 33,00 लागत। ठुलो कुरा हो कि तपाईसँग पनि शहरको एक मनोरम दृश्य छ।
यो बारेमा रोचक कुरा यो हो कि यो एक विशाल पहिया हो जुन कहिल्यै रोक्दैन, यसमा केक्सीहरूमा मिनेटको 30 समय छ। यसको अर्थ त्यो अत्यन्तै ढिलो छ, तपाईं केबिन भित्र डराउनु हुनुहुन्न। यो समय एकदम राम्रो दृश्यको लागि तपाईं वरपरको मज्जा लिन र सिंगापुर हेर्नुहोस्।
लिटिल इंडिया स्ट्रीट
यो सिंगापुरमा सानो भारतीय छिमेकी जस्तो छ र यो रंगीन मुखौटाहरू छन् र तपाई त्यहाँ त्यहाँ धेरै होटेलहरू फेला पार्नुहुन्छ। यो होटलहरूमा मिरिना बे रेandsमा दैनिक मूल्यको प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव छ।
यस छिमेकीमा तपाइँसँग सबै प्रकारको रहनहरू छन् जुन सजिलो भन्दा धेरै परिमार्जित मात्र एक सरल बिदा हो।
बे द्वारा गार्डन
यो एक प्रकारको प्राविधिक बगैचा हो जुन बेको नजिक छ। लिखित अनुवाद हुनेछ: बाग द्वारा गार्डन। यो पर्यावरणीय संरक्षणको ठाउँ हो, किनकि यो वनस्पति बगैचाको मिश्रण एक सौर बिरुवा संग भएको थियो, फूलहरु जस्तै समान बनेको थियो। यो विचारलाई ऊर्जा प्रवाह देखाउँदछ, र बिरुवाहरू सूरज रोशनी शहरहरू आपूर्ति गर्न सक्छन्। लोकेस को आदर्श वाक्य सबैको लागि सबै कुरा हो र ऊर्जालाई बुझाउँछ। यो एक पर्यावरण संरक्षण परियोजना हो जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्रीन हाउस (2014 मा) छ। यो ग्रीनहाउस फूल गुंबदमा सही छ। बगैचाले पौगको धेरै प्रजाति ल्याउँछ।
"भ्रमण" को अर्को स्थान हुनेछ विमानस्थल। यसले स्थिरता, क्षमता र सान्त्वनाको मिश्रण गर्दछ। तिनीहरूले साँच्चै पर्यटकको बारे सोचे। त्यहाँ भेला भएका ठाउँहरू छन्, जुन बिडहरू, अलंकृत पानी फव्वारेहरू, पैदल र खुट्टा मालिशको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो सबैको लागि निःशुल्क। र तपाईले अझै पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यदि हवाईअड्डा सेवा राम्रो छ।
संयोग, चांगी एयरपोर्ट भित्र होटल होटल मरीना बे को सामान्य कोठा भन्दा पनि अधिक आरामदायक छ, यसको सट्टा सस्ता! यसले विकल्पको रूपमा अर्को प्रकाशको रूपमा ल्याउँछ जुन विभाजनको रूपमा काम गर्दछ, यो गिलासमा दर्पण गरिएको छ र वास्तवमा बाथरूमको दृश्य ब्लक गर्दछ, र विभाजनको रूपमा मात्र पारदर्शी गिलाससँग बन्द गर्न सकिन्छ। जसले वातावरणलाई अझ बढी बनाउँछ। (या त बाथ टब संग दिखाया या नहाने स्नान टब को बिना)। र4जेट प्रकारको साथ एक बौछार। केवल विचार छैन कि एमबीएस छ, न त स्थान धेरै राम्रो छ, यो शहरबाट टाढा छ, तर तपाईं यसमा रहन सक्नुहुन्छ र शहरमा पुग्न सबवे प्रयोग गर्नुहोस्। यो मात्र बढी समय चाहिन्छ, तर बाहिरी अवस्थित छैन। ओह, उनले पनि यो सम्झना गरे।
खैर, म यहाँ सम्म बस्दै छु। (I.e.
थप पोष्टहरूका लागि यो तल नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्।
कसरी विमानस्थल अनन्त सीमा गम बे द्वारा गार्डन सानो भारत मारिना बे स्यान्ड्स पूल सिंगापुर फ्लायर सिंगापुर